avylavitra · Aogositra 2019 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Aogositra, 2019
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Aogositra, 2019
Mediam-bahoaka 28 Aogositra 2019
Afrika Mainty 23 Aogositra 2019
Ampianarin'ireto mpikatroka ireto ny tanora ao Dar es Sallam ny maha-zavadehibe ny fitahirizana ny natiora sy ny loza mitatao aterak'ireo harona plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja.
Fantaro i Niigaatikwe (Jordyn Flaada), hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ny 15-21 Aogositra
Antsafa 18 Aogositra 2019
Fantaro misimisy kokoa i Niigaatikwe (Jordyn Flaada), hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTechTwitter ny 15-21 Aogositra. Hozarainy ny vinavinany ho an'ny fiteny Ojibwe.
Fantaro i Mazhun Idris, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ho an'ny herinandro 14-20 Aogositra
Fantaro misimisy kokoa i Mazhun Idris, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 14-20 Aogositra 2019. Hizara ny vina sy ny fomba fijeriny ny fiteny Hausa izy.
Rising Voices 13 Aogositra 2019
Omen'ny taratasim-pifandraisana Rsigin Voices laharana faha-12 ho anareo ireo rohy rehetra mankamin'izay azo atao mifandraika amin'nhy fampiatiana nomerikaka hita ao ny fidirana sy ny fanekena ireo fitaovana dizitaly, hatramin'ny fomba sy fahafahana isankarazany ho an'ireo vondrompiarahamonina mba handraisan'izy ireo anjara feno ety anaty tambajotra.
Karaiba 10 Aogositra 2019
Nahazo alàlana hitifitra raha vao mahita ireo miaramila gineàna
Ao anatin'ny olona politika misy azy, hahazo lalàna iray mety hanaratsy kokoa ny herisetran'ny polisy ve i Ginea?
Mediam-bahoaka 06 Aogositra 2019